Xanuun baabi’iyaha Alvedon 665 milligram oo dhaqaatiirtu ka digeeyso isticmaalkiisa | Somaliska
Xanuun baabi’iyaha Alvedon 665 milligram oo dhaqaatiirtu ka digeeyso isticmaalkiisa
Muddo gaaban gudahood ayaa labo bukaan ah waxaa qasab noqotay in beerka laga badalo, ka dib markii ay si qaldan u cuneen kaniinka loo yaqaanoAlvedon 665 milligram. Dhaqaatiirka ka howlgala isbitaalka guud ee Sahlgrenska ee magaaladda Göteborg, ayaa haatan digniin ka soo saaray isticmaalka kaniinkaasi si uu warkani soo tebiyey telefeyshinka SVT.
Kaniinka Alvedon-ka ah ee dhaqaatiirtu ka bixinayaan digniinta ayaa u eg kan caadiga ah ee loo isticmaalo xanuunka. Kai Knudsen, waa dhaqtar ka howlgala isbitaalka Sahgrenska, wuxuu aaminsan yahay in ay adeg tahay in la daweeyo haddii kaniinkaasi xitaa haddii si qaldan loo isticmaalo isagoo waxyeelo culus u geeysanaya beerka. Kaniinkan ayaa u muuqaal eg ama aan waxba ka duwaneynAlvodon-ka caadiga, saas oo ay tahayna waxeey tibaxaayaan in dhibaatooyinka ay sii kor dhayaan.
Ugu dambeyntiina waaxda daawooyinka midowga Yurub ayaa ku howlan siddii ay warbixin la xirriirta kaniinka iyo saameynta balaaran ee u leeyahay beerka lugu wadaa ineey soo saaraan bilaha xilligga xagaaga ee sanadkan. Kai Knudsen, waxaa uu hoosta ka xariiqay in qaasaradiisa ay badan tahay marka loo eeggo faa’iidadiisa misna xusay inaanba loo baahneyn cunistiisa
Waa tanaa tuulada ugu qaboow aduunka, sidee u noolyihiin dadku?
Xisbiyada Mucaaradka oo balan qaaday in taageerada dhaqaale loo siyaadin doono hooyooyinka iskaabulada.